जनार्दन माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष , देशभर ३० लाख ९४ हजार १६८ माओवादी ! — newsparda.com
जनार्दन माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष , देशभर ३० लाख ९४ हजार १६८ माओवादी !
राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन सुदृढीकरण अभियानमार्फत करिब ३० लाख ९४ हजार १६८ संगठित सदस्य, सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर संगठनलाई सशक्त बनाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ ।
असोज ६, ११, १२ र १३ गते सम्पन्न माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले केही नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । यसअघि कपिलवस्तु इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएका डोरप्रसाद उपाध्यायलाई केन्द्रीय कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारी र अन्य केही संगठनात्मक निर्णय पनि भएको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ को सचिवमा हेमराज भण्डारी चयन भएका छन् भने प्रदेश २ को अध्यक्षमा प्रल्हाद बुढाथोकी र जोगबहादुर बर्बरिया यादव चयन भएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा ६ जना सह-इञ्चार्ज
माओवादीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको पनि जिम्मेवारी दिएको छ भने सुरेन्द्र कार्की ९राम कार्की० उपप्रमुख चयन भएका छन् । उनी प्रवास समन्वय समितिमा समेत इञ्चार्जको भूमिकामा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा अब एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गरिने भएको छ । हाल एकै व्यक्ति विभिन्न पदमा दोहोरिएको सन्दर्भमा अब भने पार्टीले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लागू गर्न लागिएको हो ।
सो व्यवस्था लागु गर्नका लागि विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लगिने माओवादीले निर्णय गरेको छ । यसैगरी संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले असोज पहिलो र दोस्रो साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गरेको संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि आवश्यक निर्णय भएको छ ।